Wafdi ka socday hay’adda Tika Ee Turkiga Oo booqday magaalada Jowhar Mashaariicyana Ka Fulinaya Magaaladaasi “Sawirro” – Radio Muqdisho
Wafdigani ka socda hay’adda TIKA ee dalka Turkiga ayaa booqday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabelaha Dhexe, iyagoo booqday biyo xireenka Sabuun ee duleedka magaalada Jowhar.
Wafdigani oo uu hogaaminayay Khaaliid Yamaas ayaa waxaa ay la kulmeen qaar ka mid ah mas’uuliyiinta gobolka Sh/dhexe iyagoo kulamo la yeeshay maamulka gobolka.
Saraakiishan ka socotay hay’ada Tika ayaa waxaa ay booqdeen wabiga Shabelle gaar ahaan xiintoyda oo ay carro badan haatan buuxisay,qaar ka mid ah buqaha biyaha wabiga Shabelle ay ka soo fatahaan iyo halka uu ka soo bilowdo biyo xireenka Sabuun oo burbur xoog leh ka jirey labaatankii sano ee la soo dhaafay.
Guddoomiyaha Gobolka Shabelaha Dhexe Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ka hadlay waxyaalihii ay iskula soo qaadeen wafdigan ka socday dalka Turkiga waxana uu sheegay in ay u gudbiyeen dhibaatooyinka ka jira gobolka iyo baahiyada degdegga ah ee jira.
“Waxaa ay noo sheegeen inay doonayaan inay ka qeybqaataan horumarka gobolka waxana ay hay’adda Tika inoo ballanqaaday in ay howlo carro tuur ah ka samayn doonaan wabiga Shabelle ayna qodi doonaan biyo xireenka Sabuun iyo weliba inay dayactir ku samayn doonaan wadada laamiga ah ee isku xirta magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar.”ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe.
Dayactirka kanaalka Sabuun ayaa ah mid haddii la fuliyo faa’ido badan ugu jirta beeralayda ku nool gobolada Sh/hoose iyo Sh/dhexe waxana biyo xireenkan uu dhirirkiisu gaarayaa 28km halka ballaciisuna uu yahay 30mitir. Biyo xireenka kaliya ee haatan dalka ka shaqeeya ayaa ah biyo xireenka Balcad kaasoo beeralayda khudaarta ee deegaano kamid ah Shabelaha hoose iyo Shabelaha dhexe ay ka faa’ideystaan.
Booqashada wafdiga ka socda dalka Turkiga ayaan ahayn markii ugu horeysay iyadoo hore ay dowlada Turkiga hay’ado ka socday ay ugu deeqeen shacabka gobolka xoolo munaasabada Ciidul Adxaha.
Xuquuqda Sawirada Waxaa Iska Leh Website-ka Jowhar